Biixi ayaa jeediyey khudbad dhinacyo kala duwan taabaneysay Munaasabada 26ka June… – Hagaag.com
Biixi ayaa jeediyey khudbad dhinacyo kala duwan taabaneysay Munaasabada 26ka June…
“Arrinta wadahadalada. Wadahadalada waxaynu horey uga heshiinay 2012-kii shirkii London ayay gole-yaashani u ogolaadeen in la wadahadlo. Shirkaana waxaa ka soo baxay inaynu u wadahadalno anigoo laba dowladood oo siman ah. Waana tallaabadii ugu horeysay oo wadahadaladeenu ku bilaabmay. Wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman, waxaana uu ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman, wax ka yarna cidi soo qaadi mayso.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland.
“Is dhexgalka kale wuxuu ku xirnaanayaa, tusaale ahaan koox cayaareysa kubadda cagta ayaaba la doonayaa inay tagto Koonfur, waa inay taggaan ayagoo Basaboorka Somaliland sita, oo Dowladda Somaliland dirtay, oo magaca Somaliland ku cayaaraya.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland.
Madaxweynaha ayaa yiri “Koox muusik ah ayaa tageysa waxay ku tageysaa Basaboorka, Calanka iyo magaca Somaliland ayagoo sita. Qof muraad u socda waa yeelkii, laakiin wixii hay’ad ah ama koox ahi waxay ku taggi karaan Basaboorka, Calanka iyo magaca Somaliland. Fiiso ayay siineysaa Muqdisho, waa loogu dhufanayaa, haddii intaa la waayo cidina taggi mayso. Waayo is gaadi mayno, iyagu ma ogola inay sidaa yeelaan oo fiiso bixiyaan, waxay inoo arkaan Gobolada Waqooyiga, inaguna tab ayagoo kale tab ahee, waxaanu u aragnaa laba dowladood inaan nahay. Qof aan Basaboorka Somaliland loo fiiseyneynin isu taggi maayo.”
Madaxweyne oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Ma xiri karno lacagta iyo ganacsiga is dhexgalay, ma xiri karno qofka sodogii soo siyaaranaya, qofka qof buka u tagaaya ama qof shakhsiya muraadkiisa u tagaaya. Iminka iyo haddeer labada dhinacba waa wada socdaan.”